Isithethi esinye se-SPC, isithethi esingenazingcingo kubo bonke abaphulaphuli | Iindaba zeGajethi
Isithethi esinye se-SPC, isithethi sabo bonke abaphulaphuli [UHLAZIYO + SWEEPSTAKES]
Izithethi ezingenazingcingo ziba yinto exhaphake ngakumbi kumakhaya onke, kwaye kukuba ukuphatheka kwabo, umgangatho wesandi abasinikelayo kunye nazo zonke iindlela ezinokubangela ukuba zenziwe zenze ukuba zibe yinto efanelekileyo.
Intle kangakanani into elungileyo, entle, eshibhile kunye nesithethi esincinci ngeli hlobo. KwiActualidad Gadget siyazi kakuhle, yiyo loo nto sikuzisela esi Somlomo sivela kwi-SPC, isithethi esinezinto ezintle, ubungakanani obuncinci kunye noyilo olunqabileyo esiza kuluthintela phakathi kwabafundi beli phepha. Ke, Ngena kwaye ungaphoswa yinto ekufuneka sikuxelele yona nge-SPC's Somlomo, kuba ukuyifumana kuya kuba lula kakhulu kwaye kuyakukukhapha kuyo yonke indawo.
Siyawuthanda umculo, kwaye ukho ngakumbi nangakumbi. Ngapha koko, umxholo womculo awuzange ube kwiindawo ezininzi njengokuba kunjalo ngoku kwiinkqubo ezinje ngeSpotify kunye neApple Music, oku kuthetha ukuba imfuno ye-wireless iyanda. I-SPC, inkampani ekhethekileyo ekulawuleni idemokhrasi kuzo zonke iintlobo zomxholo wetekhnoloji, ihlala ithathela ingqalelo iimfuno zoninzi lwabasebenzisi bayo, Uluhlu lwesithethi lucacile, kwaye esiSithethi esinye siso esivulayo.
1 Uyilo olunye lweSithethi kunye neempawu
2 Ukusebenza kunye nokufikelela
3 I-SPC yoSomlomo omnye onikezela
Uyilo olunye lweSithethi kunye neempawu
Esi sithethi senziwe ngaphambili kwento eyomeleleyo yendwangu eyomeleleyo enika imvakalelo enomdla kakhulu ukuba sithathela ingqalelo imveliso esijongene nayo. Isithethi esincinci esingenazingcingo se 4W enika isandi esicacileyo, nangona i-bass ayizukuba yindawo yayo eqinileyo, ukuba sithathela ingqalelo ubukhulu be I-92 x 80 x 30 mm iya kusishiya sivule umlomo. Inyani yile yokuba sivavanya isithethi esincinci ngakumbi nangcono. I-logo ibekwe ngaphambili kwithoni yobhedu.
Isithethi sinobunzima ziigram ezili-160 kuphela kwaye kumacala omane yenziwe ngento enesilicone eya kuyenza ukuba imelane, ikhululeke kwaye isebenziseke lula. Ngale ndlela ukuhambisa akuyi kuba yingozi, kuya kulungelelaniswa kakuhle nayo nayiphi na inqwelomoya apho siyibeka khona. Ke, kwicala lasekunene siya kufumana isiciko apho izibuko lokutshaja le-microUSB (intambo ifakiwe ebhokisini) kunye 3,5 mm uqhagamshelo lwe-AUX Ngala mathuba apho singazokwazi ukusebenzisa ubuchwephesha beBluetooth nangasiphi na isizathu, uSomlomo omnye akanamida.
Ukusebenza kunye nokufikelela
Isithethi esinye nguSI-PC isinika, njengoko besitshilo, amandla e-4WOku kuyokwanela iimeko zangaphakathi, izinto ziya zisiba nzima ukuba sizimisele ukuzisebenzisa kwiindawo ezivulekileyo ezinengxolo kuyo yonke indawo, sisithethi esincinci kwaye kufuneka siqwalasele eli nqanaba. Nangona kunjalo, inyani kukuba iyazikhusela kakuhle kuzo zonke iimeko kuthathelwa ingqalelo ubungakanani bayo. Ibhetri yayo iya kusinika ukuya kuthi ga kwiiyure ezintathu ezipheleleyo zokuzimela, umculo ongapheliyo. Xa sihamba into engaphezulu kweshumi okanye ishumi elinesihlanu leemitha Singafumana ukuphazamiseka okanye ukulahleka kweempawu, kodwa yindawo yokuthatha ingqalelo.
Ngakolunye uhlangothi, Ngaphezulu sinepaneli yamaqhosha enamaqhosha aMandla, Dlala / Misa, amaqhosha amabini eVolumu kunye nokukhetha ukuthatha iifowuni, musa ukuwumisa uMculo. Kwaye kukuba simamele umculo kodwa ifowuni yethu ikude kakhulu okanye simanzi ukusuka echibini, eli qhosha lokuthatha umnxeba yeyona nto inomdla kakhulu ukuba iqela le-SPC likwazile ukubandakanya kwesi sithethi sinye.
Ungayibamba kwiwebhusayithi ye-SPC apha esi sixhobo yi kuphela i-19,90 euroIxabiso elihlengahlengiswe kakhulu apho esi siThethi siShukumayo sihamba khona.
I-SPC yoSomlomo omnye onikezela
Ukuba ufuna ukufaka i-raffle yesi sithethi simnandi, Kufuneka ulandele i-Twitter ka-agadget nge- LONTO kwaye wenze i-RT nakweyiphi na i-tweets esiyithumelayo ngokubhekisele kwesi sithethi. Ungathatha ithuba usixelele ngendlela yoqobo ukuba uza kwenza ntoni ngoSomlomo wakho oMnye.
Isithethi sizikhusela ngokuqaqambileyo kumathuba amaninzi, ukongeza kokumnyama nokublowu sinoluhlu olutsha olubizwa ngokuba Ushicilelo lweBhoho yehlobo elinombala otyheli, oluhlaza kunye nepinki kwaye lahlukile nje. Inyani yile yokuba sijamelene nesithethi esakhiwe kakuhle nge- € 19,90 kuphela, kungoko sinokubuza okungaphezulu. Usenokulahleka kancinci, kodwa inyani kukuba isandi sicacile kwaye sisebenza phantse kuzo zonke iimeko. Yimveliso ekhuthazwayo ethathela ingqalelo ubunzima bayo kunye nobukhulu, enye yezi ayishiywanga kwidrowa yethu yezixhobo.
Isithethi esinye se-SPC, isithethi sabo bonke abaphulaphuli
Akukho slot ye-MicroSD
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Isithethi esinye se-SPC, isithethi sabo bonke abaphulaphuli [UHLAZIYO + SWEEPSTAKES]
Unini umhla wedraw kwaye uza kuyipapasha phi?
Enkosi ngephulo !!
Sawubona uRaúl, yonke into iya kwenziwa kwi-Twitter.
Siza kubhengeza ophumeleleyo ngomso.
Idayinaso yeGoogle Chrome ifika ikwimo yomdlalo kuGoogle Play
Isamsung yeGear Fit2 Pro iya kuba liqabane elifanelekileyo kwi-Samsung Galaxy Note 8